लगानीकर्ता हावी हुँदा नेप्से ४ अङ्कले घट्यो | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर लगानीकर्ता हावी हुँदा नेप्से ४ अङ्कले घट्यो
on: २१ भाद्र २०७५, बिहीबार १६:३३ मुख्य खबर, लगानी
लगानीकर्ता हावी हुँदा नेप्से ४ अङ्कले घट्यो
कारोबार रकममा भएको वृद्धिले बजार बढ्ने लगानीकर्ताको अनुमान
भदौ २१, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचकमा उतारचढाब आएको छ । कारोबार शुरु भएको सभा १ घण्टासम्म बढेको बजार आधार घण्टासम्म घटेको थियो । त्यसपछि पुन २० मिनेट बढेको बजार अन्त्यसम्म घटेर बन्द भएको छ । १ हजार २ सय ३४ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक आधा घण्टामा बढेर १ हजार २ सय ४६ विन्दुमा पुगेको थियो । सभा २ घण्टामा घटेर १ हजार २ सय २५ विन्दुमा झरेको थियो । भने अन्त्यमा ४ दशमलव ३६ अङ्कले घटेर १ हजार २ सय २९ दशमलव ७७ विन्दुमा पुगेको छ ।
लगातार बढीरहेको बजारमा लगानीकर्ता नाफा बुक गर्न थालेपछि बजार बढेर बन्द भएको छ । परिसूचक घटेपनि कारोबार रकम भने बढेको छ । आइतवारको कारोबारमा कारोबार रकम बढ्यो भने बजार बढ्न सक्ने अनुमान लगानीकर्ताहरुले गरेका छन् । विभिन्न सूचना सामाजिक सञ्चालनहरुमा लगानीकर्ताहरुले शेयर बजार ठुला लागनीकर्ताहरु पसेको अनुमान गरी आफ्नो पोष्ट गरेका छन् । यदि साच्चिकै ठुला लगानीकर्ताहरु आएको रहेछन् भने आइतवारको कारोबारमा रकम सहित बजार बढ्ने अनुमान गरेका छन् ।
कारोबार भएका ११ समूहको परिसूचकमा व्यापर, उत्पादन तथा प्रशोधा समूह र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ३५ प्रतिशतले घटेको हो । निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक १ दशमलव ३९ प्रतिशत, जलविद्युतको १ दशमलव १२, विकास बैङ्कको १ दशमलव शून्य १ र लघुवित्तको शून्य दशमलव ९९ प्रतिशतले घटेको छ ।
कारोबार भएका १ सय ७४ कम्पनीको ८ हजार ६ सय ५३ पटकको व्यापारमा ३२ लाख ३९ हजार ९ सय ८५ कित्ता शेयरको रू. ७९ करोड ७३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेप्सेमा सर्वाधिक शेयर कारोबार हुने १० कम्पनीमा एनएमबि बैङ्कको प्रतिकित्ता रू. ३ सय ३६ मा रू. १० करोड ३४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
साथै, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको संस्थापक तर्फको प्रतिकित्ता रू. ३ सय ५० मा रू. ५ करोड ५७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कावेली विकास बैङ्कको शेयर मूल्य ९ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. २ सय ८४ मा कारोबार भएको छ । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ५ दशमलव ८३ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. ७ सय ६२ मा कारोबार भएको छ । त्यसैगरि, मल्टीपर्पस फिनान्स कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव २७ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता रू. १ सय ७६ मा कारोबार भएको छ ।
७.२१ अंकले घट्यो नेप्से
६ फाल्गुन २०७५, सोमबार १७:३८
६.६४ अंकले घटेर ११०३.०८ विन्दुमा नेप्से (२ बजेको अपडेट)
६ फाल्गुन २०७५, सोमबार १४:१३
६ फाल्गुन २०७५, सोमबार १२:०९
नेप्से प्राविधिक विश्लेषण(सोमवार, ६ फागुन २०७५)
५ फाल्गुन २०७५, आईतवार १७:२५